yintoni indima yomphathi we-qa?
Eyona Qa Yintoni indima yoMphathi weQA?
Abaphathi beQA badlala indima ebalulekileyo kwimpumelelo yeshishini ngokuqinisekisa ukuba iimveliso zesoftware ziyahlangabezana nokulindelwe ngumsebenzisi. Bacwangcisa kwaye baququzelele amaqela eQA ukwenza iinkqubo zolawulo lomgangatho entlanganweni. Bakwasebenza ukuphucula ukusebenza kombutho kunye nenzuzo. Nangona kunjalo, njengoko iifemu zihamba ziye kwimeko ye-agile, abaphathi be-QA bajongana ne-conundrum.
Kuya kusiba nzima kubaphathi ukuba baqonde indima yabo xa ingachazwanga kumbutho we-agile. Ezi ngcali ziyayazi imisebenzi yazo kunye noxanduva lwabo kwindawo yemveli yamanzi.
Abaphathi be-QA banokugqwesa ngokuqonda ngqo ukuba yintoni efunekayo njengoko bephethe iiprojekthi ze-agile.
Indima yoMphathi weQA
Makhe sibone ukuba umphathi weQA angadlala njani indima efanelekileyo ekuqinisekiseni umgangatho:
Xa umbutho usiya kwiindlela ezi-agile, iqela lokuphuhlisa likhokela kunye nabavavanyi ngaphakathi kwamaqela kufanele ukuba baphathe umgangatho.
Xa iqela linoxanduva lomgangatho kwaye ukusebenza kwawo kulinganiswa ngomgangatho wekhowudi, bahlala behambisa ikhowudi ekumgangatho ophezulu. Umgangatho uba yinxalenye yocwangciso, uphuhliso kunye neenkqubo zokuvavanya. Ikhowudi esemgangathweni esekwe ziziphumo ezinokulinganiswa iba yinto ekujolise kuyo kwiqela liphela le-QA elibanceda ukuba bahambise ikhowudi engcono.
Nangona kunjalo, kukho inkalo embi koku. Kuthatha ixesha elininzi kunye nomzamo kumbutho ukuba uhambe uye kwiinkqubo ze-agile, ngaphambi kokuba umgangatho ube kumgangatho wabo wokhuphiswano.
Abaphuhlisi kunye nabavavanyi baxhotyiswe ngezakhono zobuchwephesha kwaye bajolise nakwimiba yezobuchwephesha yeQA, ezinje ngovavanyo oluzenzekelayo kunye nezixhobo. Bahlala beqhawulwa kwiinkalo zolawulo kubandakanya ikhowudi, ukudityaniswa kunye nokusebenza nabathengi.
I-QA ngumsebenzi kwaye ayisiyiyo nje into umntu anokuyenza ngelixa esenza iimveliso zesoftware. Kuya kufuneka babe nemvelaphi efanelekileyo kwaye bahlale benolwazi lwamva nje izixhobo zolawulo lovavanyo , ubuchwepheshe, kunye neendlela.
Nangona amaqela agile anikwa inkululeko kunye noxanduva lokulawula imisebenzi yabo, umbutho xa uwonke kusafuneka usebenze njengeyunithi enye.
Abaphathi be-QA kufuneka basete imigaqo-siseko esisiseko enje ngokuba zeziphi izixhobo zovavanyo ekufuneka zisetyenzisiwe, zeziphi iindlela ekufuneka bezisebenzisile, indlela yokuchaza imeko yesiphene, njl.
Abaphathi be-QA kufuneka basebenze ngokusondeleyo nabaphathi be-R & D ekuchazeni imigangatho, njengoko bejonga indlela ezaziswa ngayo kumaqela, ukuba aqeqeshwa njani kwaye inkqubela phambili yawo ilawulwa njani ukugcina umgangatho uphambili kuyo yonke inkqubo yophuhliso.
Esi sikhokelo sinceda abaphathi be-R & D ukuba basebenzise iinkqubo zeQA ngaphakathi kwamaqela abo kwaye babagcine bekhuthazwa kukuhamba ngendlela elungileyo.
Iqela ngalinye lophuhliso linabaphuhlisi abanommandla wabo wobuchule. Iqela elinye lophuhliso linokusebenza kwi-UI, ngelixa abanye begxila kwiinkonzo zokuphela kwesicelo.
Abaphuhlisi bafuna iintlobo ezahlukeneyo zolwazi olukhethekileyo kwiiprojekthi ezahlukeneyo zophuhliso, njengezandla kunye uvavanyo oluzenzekelayo . Nangona kunjalo, uvavanyo oluzenzekelayo lunokwahluka, kuxhomekeka ekubeni usebenza kwi-UI, REST API, njl.
Umphathi we-QA udlala indima ebalulekileyo ekwakheni iqela ngobulumko, ngenani elifanelekileyo labaphuhlisi, iinjineli zovavanyo kunye neengcali zeQA. Bachaza iindima zabo kunye noxanduva lwabo kwaye baqinisekisa ukuba abavavanyi baxhotyiswe ngezixhobo ezifanelekileyo zolawulo lovavanyo ukufezekisa iiprojekthi ezinempumelelo.
Ukukhathalelwa ngenyameko kweMetric esemgangathweni
Phambi kokuvavanya umgangatho weemveliso, kunyanzelekile ukuba kusekwe abavavanyi beemetrikhi abaza kuyisebenzisa ukuyilinganisa. Umphathi we-QA kufuneka ancede amaqela ophuhliso ekuchazeni umgangatho wemetriki.
Umzekelo, ungazicacisa njani iziphene? Ungayichaza njani ukusebenza kwayo? Uthini umlinganiso wokuhlengahlengisa? Yintoni ebangele ukubuyela umva? Kwaye okuninzi.
Umphathi ukwajonga imeko yeemetrikhi kuwo onke amaqela entlangano. Oku akuqinisekisi kuphela umgangatho wekhowudi xa iyonke kodwa kukwabanceda ukuba babone amaqela anokungasebenzi ngokufanelekileyo.
Zininzi izizathu zokuba kutheni amaqela esenza kakubi. Basenokungalandeli iindlela zovavanyo ezichanekileyo, okanye umgangatho wokuqala wekhowudi usenokungakulungeli ngokwaneleyo, oko kukhokelela kwinani elonyukayo leziphene.
Ukongeza, ngenxa yokungonelanga kwekhowudi kuvavanyo oluzenzekelayo kunokubakho imeko yokufumana iimpazamo. Nokuba sithini na isizathu, ngumsebenzi womphathi weQA ukuchonga umba nokuqinisekisa ukuba amaqela enza ezona ndlela zibalaseleyo zomsebenzi.
Sebenza kuMgangatho oPheleleyo
Ngokwesiqhelo, amaqela ophuhliso ayaphuhlisa, avavanye kwaye ahambise amabali abasebenzisi kwiindawo zabo, ngelixa kuxhomekeke kwiingcali zeQA ukwenza uvavanyo olusebenzayo ukuze kuqinisekiswe ukuba yonke into isebenza kakuhle.
Bajonge ukuvavanya unxibelelwano phakathi kweemodyuli ezahlukeneyo kwiindawo ezahlukeneyo ukuqinisekisa ukuba inkqubo isebenza ngaphandle kokudityaniswa, ukusebenza okanye imiba yezokhuseleko.
Umphathi we-QA udlala indima ebalulekileyo ekuqinisekiseni ubulunga benkqubo yonke.
Xa bechonga iingxaki kwinqanaba lenkqubo, kufuneka basebenze njengebhulorho phakathi kwabaphuhlisi, abakhi beQA kunye nabavavanyi.
Njengokuba befumana igalelo kuwo onke la maqela, babekwe ngendlela eyodwa ukuze bajonge imeko yesicelo kwaye bachonge imiqobo yokuthatha amanyathelo afike ngexesha.
Ukubetha ibhalansi elungileyo
Umphathi we-QA ubeka iinzame zokulinganisa iimfuno zovavanyo kumaqela abo ngaphakathi. Ukuba kukho imfuneko yemijikelezo yovavanyo eyongezelelweyo, ukukhokela kweqela lophuhliso kunokwabela abavavanyi abongezelelweyo kwiqela.
Abaphathi be-QA banokuhambisa abaphuhlisi okanye abavavanyi phakathi kwamaqela ukujongana nemfuno yeyure yovavanyo.
Umphathi we-QA udlala indima ebalulekileyo kumbutho we-agile, kwaye kufuneka abe nombono nesicwangciso. Kuya kufuneka bahlale phambili kutshintsho olutsha kwi-QA domain, bavavanye izixhobo zolawulo zovavanyo kunye nokufunda iindlela ezintsha.
Umphathi weQA kufuneka aphumeze iinkqubo zeQA ngaphakathi kweqela kwaye aziphucule ngokuchaza imisebenzi, ukubeka izinto eziphambili ngokubaluleka kunye nokulinganisa izixhobo zabo kwinqanaba leqela. Oku kuvumela onke amaqela akumbutho ukuba asebenze kunye kwaye ahambelane nemveliso yezicelo ezikumgangatho ophezulu.
I-Agile kunye neNdawo yoMphathi weQA
Iimpawu ze-12 zeenkokeli ezilunge kakhulu
Ukuvula kunye nokuvala iithebhu kuhlobo lwe-Android lweChannel ngoku kulula kancinci
Uluhlu lwadlalwayo loMculo ku-YouTube 'lokudlala kwakhona', olufana neSpotify kunye neapos 's Ukuphindaphinda', kukhutshwa kubasebenzisi
Ixabiso le-HTC One (M8) kunye nomhla wokukhutshwa
Ungayicoca njani i-iPhone 11 yakho, i-iPhone XS okanye i-iPhone XR kunye ne-apos ye-RAM
U-Obama wayenayo 'i-Berry yakhe kunye ne-Selectra Edge; UTrump usebenzisa izibini eziphathwayo ze-Apple iPhone
Le Moto Mod ibonisa ukutshaja ngaphandle kwamacingo kunye ne-IR blaster ye- $ 45 nje
Ukuhlaziywa kweSamsung kunye neapos; umdlalo weGear oMtsha ulungisa idreyini yebhetri, izisa iimpawu zomsebenzi wesiko